Top News Golaha ammaanka ee Qaramada Midoobay oo ansixisay weerar ka dhan ah Daacish – Kismaayo24 News Agency
by admin 21st November 2015 021
Golaha ammaanka ee Qaramada Midoobey ayaa meel mariyay qaraar ay soo gudbisay xukuumadda Faransiiska, kaasi oo ah in dagaal lala galo kooxda Daacish.
Qaraarkan ayaa ogolaanaya in dhammaan dalalka awooda leh ay ka qeyb galaan dagaal ka dhan ah kooxda Daacish, oo awood ciidan ku leh qeybo ka mid ah wadamada Ciraaq iyo Suuriya.
Dhinaca kele Golaha ammaanka ee Qaramada Midoobay ayaa si kulul u cambaareeyey weeraradii Paris lagu qaaday todobaadkii la soo dhaafay, halka dowladda Faransiiska ay sheegtay in ay qaadi doonto talaabo milateri,oo ay isku difaacayso.
Xoghayaha arrimaha dibadda Mareykanka John Kerry ayaa sheegay in Daacish ay la kulmi doonto dagaal xooggan, oo lagu soo afjarayo jiritaanka kooxda, iyadoo dalalka Ruushka iyo Faransiiska ay iska kaashanayan duqeynta ka dhanka ah kooxda Daacish.
Go’aanka golaha ammaanka ayaa ka dambeeyay kaddib markii kooxda Daacish ay sheegatay mas’uuliyadda weerarkii Paris lagu qaaday oo tirada dadka ku dhimatay ay hada gaartay 130 qof iyo diyaaradii Ruushka laga lahaa ee ku soo dhacday gacanka Siinaay ee dalka Masar oo ay ku dhinteen 224 qof.
Gen Darwiish iyo Cabdirashiid Janan oo Xarun Cusub ka furay….
War Cusub: Ciidamada AMISOM ee ku sugan dagmada afgooye oo arin lama filaan ah sameeyay xili guri kasto laga…..
Daawo Barnaamijka Damaashadka Ciida ee Holland
Dhagayso:- Nikolas Kay oo Cambareyeey Weraarkii Xarunta Golaha Shacabka Muqdisho